Fujian Jinjiang baishiqing ingubo Ukuluka Co., Ltd.imi kunxweme olusemazantsi mpuma eTshayina, kufutshane nePhondo laseZhejiang emantla mpuma, kwiPhondo laseJiangxi emantla ntshona, kwiPhondo laseGuangdong kumazantsi mpuma, kwaye lijongene nePhondo laseTaiwan ngaphesheya kweTaiwan Strait kumazantsi mpuma. Inkampani yasekwa kwiminyaka ye-1990, ineminyaka engaphezu kwama-30 yamava osisityebi wokuvelisa iimpahla, siyimveliso yobungcali yeentlobo ezahlukeneyo zangaphantsi kunye nempahla yangaphantsi yamashishini amakhulu. Indawo yokwakha zii-15000 square metres.
Sineentlobo ezintathu eziphambili
iimpahla zangaphantsi, isuti yeyoga kunye nesuti yokuqubha
Uyilo lwangaphantsi sihambelana nalo:ukunamathela komzimba, ubuhle entliziyweni; Ukusetyenziswa kwendwangu esihambelana nayo: kukhululekile kwaye kugqibelele, impilo kuqala. Ngokobuchwephesha,ngqo kwi:Chaza umzimba ogqibeleleyo, unokuzithemba kwaye uhlala uhamba nawo. Sikhetha ilaphu ekumgangatho ophezulu ukwenza isuti yeyoga, enokuma kwaye yomoya ngokukhawuleza. Ukulungele ukubaleka, iyoga, ukutsiba, izixhobo zemidlalo kunye nezinye iindlela zokuzilolonga.
Amakhwenkwe namantombazana banokunxiba iimpahla zokudada. Iimpawu zelaphu: ithambile, ikhululekile, yoma ngokukhawuleza, ayiyityhefu. Uhlobo loyilo luthandwa kakhulu namhlanje.
Ezi zilapha ngasentla ziimveliso zethu, kushishino kwaye abathengi babevela kubathengi abahlukeneyo bendumiso ephezulu kunye nendumiso.
Wamkelekile ku Buza
Umnqophiso: Hlanganisa abo banokholo olufanayo, kwaye ulwele umbono oqhelekileyo; Yakha inkqubo efanelekileyo yokubonelela ngokubonelela ngezambatho kunye nenkonzo ekumgangatho ophezulu;
Uphuhliso lwefilosofi: Hlala phambili ngomphetho okhuphisanayo, bambelela kuphuhliso olunzulu.
Ixabiso: Imfezeko kunye nokulingana Umthengi wokuqala ojolise kuBantu esebenza nzima
Umoya weshishini: Siya! Singa!
Umatshini ojikelezayo omkhulu